Salaadiga, bixinta, xidhiidhka ducada, Qeybta 2 (Salaaddii Kitaabka Quduuska ah # 262)
TEXT: 2 Korintos 9: 7-15
7 Nin kastaa sidii loogu qasbay ee qalbigiisu raalli ka yahay, sidaasuu u barakoobi doonaa. oo maahmaahyada la jecel yahay ay dhammaystirmaan aawadood, waayo, Ilaah wuxuu jecel yahay kan farxad wax ku bixiya.
8 Ilaah wuxuu karaa inuu nimco oo dhan idiin badiyo; inaad mar kasta wax kasta oo idinku filan haysataan inaad shuqul kasta oo wanaagsan ku badisaan;
11 Wax kasta idinka waa laydinku hodansiin doonaa xagga deeqsinimada inaga dhex shaqaysa oo dhan ee aawadeed Ilaah loogu mahad naqo.
Waayo, shuqulka adeegiddiisu ma ay raallinimo ka helin quduusiintiisa, laakiin waa ku barako Ilaaha jirrabaadda.
13 Iyagu waxay ku hadlaan hadal faan ah oo aan micne lahayn, idinkuna waxay idiin yihiin adhijirro wanaagsan oo xagga Masiix, iyo inaan dadka oo dhan garansi lahayn,
14 Iyo baryootankayaga aad xajin weydaan sidii Ilaah aaminnimo idiinku dambeeyey.
15 Mahad waxaa leh Ilaaha ugu sarreeya raalli ahaanshihiisa.
Waxaan ku jirnaa fariimo taxane ah oo lagu magacaabo "Duco Bixin Kitaabka Qudduuska ah: Seri kasta oo Qorraxda iyo Cibaadada ah ee ku saabsan Salaadda Kitaabka Quduuska ah." Ujeedada taxanahan waa inaad ku dhiirrigeliso oo aad ku dhiirigeliso inaad ku tukatid Ilaaha Quduuska ah. Waxaan cadeeynay mid kasta oo ka mid ah in ka badan 500 aayaadkiisa iyo marxaladaha ku jira Quduuska ah Motivator Diinta Quduuska ah. Illaa iyo hadda, waxaan dhammeystirnay 261 farriimo taxanahan.
Tani waa farriin # 262 oo cinwaankeedu yahay, salaadda, bixinta, xidhiidhinta duco, Qeybta 2aad.
Qoraalkan, waxaanu ku aragnaa Bawlos ku dhiirrigeliyay rumaystayaasha Korintos inay siiyaan rumaystayaasha Yeruusaalem. Marka uu kiiskiisa ka dhigo, wuxuu siinayaa afar faa'iido oo la keeno markii Masiixiyiintu rabaan inay bixiyaan baahida kuwa kale - afar waxyaalood oo ka mid ah salaadda jawaabta, haddii aad rabto. Waa hal arrin oo lagu sheego in aad tukaneysid xaalad qof, laakiin waa wax kale oo lagu muujiyo dareenkaaga adiga oo siinaya ama u adeegaya si loo yareeyo dhibaatadooda. Waxaan hubaa in dhibanayaasha Hurricane Harvey iyo Hurricane Irma ay ka mahad celinayaan nuucyadeena, laakiin waxay ka mahadcelinayaan lacag badan oo aan bixinno iyo sahayadii aan u dirnay. Iyo, sida USA USA warbixintan lagu xusay toddobaadkan, waa hay'adaha masiixiga ah ee bixiya inta badan gargaarka bini-aadamka ee dhulka.
Nasaarada Yeruusaalem ma aysan helin duufaan si ay ula macaamilaan, laakiin waxay la kulmaan faqri aad u daran sababtoo ah waxaa si weyn looga gooyey bulshada iyada oo ay ugu wacan tahay qibradooda rumaysadka Masiixa ee ku yaala bartamaha Yuhuudda. Bawlos waxa uu rabay in Corinthians ay bixiso waxa ay ka maqan yihiin dadka Masiixiyiinta ah ee Yeruusaalem. Fikradda InterVarsity Press waxay ku qeexday in "caawimada gaarka ah ee ay bixisay bixinta Kawnida Kibistu waa in la keeno baahida Masiixiyiinta Judea, ereyga loo adeegsaday waxa uu tilmaamayaa yaraanta ama yaraanta baahiyaha asaasiga ah.Xagga qarnigii koobaad, dharka, iyo hoyga, sidaas darteed kaalmada ay bixiso adduunka Corinthians waa mid loo baahdo, maaha raaxo. "
Haddii Corinthians ay rumaystayaasha Yeruusaalem ku siisay, Bawlos wuxuu u sheegayaa inay iyagu doonayaan "quduusiinta quduusiinta." Tani waa ducada ugu horeysa ee si xor ah u siisa kuwa baahan. Ereyga "rabo" macnaheedu waa "maqnaansho". Deeqda lacageed ee ka jirta kaniisadda Korintaanka ayaa buuxin doonta godadka ku yaal kaniisadaha ku yaal Yeruusaalem. Waxay bixinayaan waxa ay ururku ka maqan yihiin. Laakiin Bawlos wuxuu leeyahay xitaa hadiyado ka fiican marka loo baahdo in la raaco ficillada bixinta.
Ku sii wadista cutubka 12, wuxuu sheegayaa hadiyadooda inay sidoo kale "mahadnaq badan u tahay Ilaah" tukasho ahaan. Tani waa duco labaad oo si xor ah u siisa kuwa u baahan. Haddii si kale loo dhigo, hadiyadda ay bixiyaan kaniisadda Yeruusaalem waxay sii kori doontaa xitaa waxa ay doonayaan iyo waxay noqon doonaan sabab soo noqnoqod ah ama qulqulaya mahadnaqa Ilaah ee salaadda. Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu sheegayaa in Ilaah "uu ku noolyahay [joogitaankiisa laga helayo] ammaantiisa dadkiisa." Hadiyadda Kitaabka Qudduuska ah ee Kiniisadda siinaya waxay keeni doontaa Masiixiyiinta Yeruusaalem in aysan mar dambe ku tukan doonin baahidooda si loo daboolo, laakiin si ay u tukadaan "badan" mahadnaqnimo badan oo baahidooda la daboolay. Waxay odhan doonaan "mahadsanid" Ilaah.
Adigu ma waxaad tahay qofkii Ilaah ku mahad naqo in marka hore la ammaano? Miyaad ahayd sababtii qof kaniisad u timid oo loo soo gudbiyey warbixin ammaan ah halkii codsi duco ah? Haddii aysan ahayn, sababta aadan u bilaabin si xor ah maanta? Bixi baahida qof kale. Ku siiso sabab ay uga mahadcelineyso.
Meelaha aan la wadaagi karno isku midka ah Robert Murray kuwaas oo soo qoray erayadan:
Sayidow, waad farxi doontaa,
Yaa leh wadnaha furan iyo gacantaba
Waxay u duceeyaan si xur ah, sida webiga
Taas oo dhan dalka oo dhan.
Haddaba noo abaalgudi roonaanta;
Iyada oo ruux ruux weyn oo bilaash ah,
Taasoo ah nolosheena iyo dhammaan nolosheena
Waxaa laga yaabaa inaan ku sifeyno Youre.
Hadda, haddaad nala joogtaan maanta, oo aadan aqoonin Rabbi Ciise Masiix oo ah Badbaadiyeheenna, salaaddaada ugu horreysa waxay ubaahantahay waxa aan ugu yeerno Salaadda Salaadda. Marka hore, fadlan faham inaad tahay dembiile, sida aan ahay, iyo inaad jebisay sharciyada Ilaah. Baybalku wuxuu sheegayaa Rooma 3:23: "Waayo, dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah."
Marka labaad, aqbal xaqiiqda ah in ay jirto ciqaab dembi ah. Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu ku qoran yahay Rooma 6:23: "Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada ..."
Saddex, aqbal xaqiiqda ah inaad ku jirto jidka jahannamada. Ciise Masiix wuxuu ku yidhi Matayos 10:28: "Ha ka baqina kuwa jidhka dila, laakiin aan awoodin inay dilaan, laakiin ka baqa kan naftiisa iyo jidhka jahannamada ku baabi'in kara." Sidoo kale, Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu sheegayaa Muujintii 21: 8: "Laakiin kuwa cabsila'aana, iyo kuwa aan rumaysan, iyo kuwa karaahiyada ah, iyo gacankudhiiglayaasha, iyo kuwa sinaysta, iyo saaxiriinta, iyo kuwa sanamyada caabuda, iyo beenlowyada oo dhan waxaa iska lahaan doona biyaha agtiisa, naxwe: taas oo ah dhimashada labaad. "
Hadda tani waa war xun, laakiin halkan waa war wanaagsan. Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 3:16: "Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."
Kaliya aaminsan tahay qalbigaaga in Ciise Masiix uu u dhintay dembiyadiinna, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay by awoodda Ilaah aad si aad u noolaan kara weligiis isaga la leh. U soo ducee oo waydiiso inuu ku yimaado qalbigaaga maanta, wuuna rabaa.
Rooma 10: 9 & 13 wuxuu leeyahay, "Haddii aad afkaaga ku qirto Rabbi Ciise, oo aad rumaysan tahay in Ilaah ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa ... Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, Rabbiga ayaa badbaadi doona. "
Haddii aad aaminsan tahay in Ciise Masiix uu ku dhintay iskutallaabtaada dembiyadiinna aawadiis, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay, oo aad doonaysid inaad ku aamino badbaadadaada maanta, fadlan ila soo ducee tukashadan fudud: Aabbaha Quduuska ah, waxaan ogahay in aniga Anigu waxaan ahay dembiile iyo in aan sameeyo waxyaabo xun noloshayda. Waayo, Ciise Masiix aawadiis, dembiyadaydii i cafi. Hadda waxaan rumaysanahay qalbigayga oo dhan in Ciise Masiix aniga igu dhintay, la aasay, oo mar kale kor u kacay. Rabbi Ciise, fadlan kaligeyga geli oo naftayda badbaadi oo noloshayda iska bedesho maanta. Aamiin.
Haddii aad ku kalsoon tahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyehaaga, oo aad tukatid tukashadan oo macneheedu yahay in aad ka timid, waxaan idiin sheegayaa in ku salaysan ereyga Ilaah, hadda waxaad ka badbaadsan tahay Jahannama oo waxaad ku socotaa jannada. Ku soo dhawaada qoyska Ilaah! Hambalyo ku saabsan ku kalsoonaanta Ciise Masiix sida Rabbiga ah Badbaadiyehaaga. Waxaad samaysay waxa ugu muhiimsan nolosha. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah si aad uga caawiso inaad kor ugu qaaddo rumaysadka cusub ee Masiixa, u gudub Gospel In Light Society.com oo akhri "Waxa aad sameyneyso marka aad gasho albaabka". Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 10: 9, "Anigu waxaan ahay albaab, haddii qof uun galo, wuu badbaadi doonaa, oo wuu iman doonaa, oo geli doonaa, oo wuxuu heli doonaa daaqsin."
Ilaah wuu idin jecel yahay. Wan ku jecelnahay. Oo Ilaah wuu idin barakayn doonaa.